Sida aan wada ogsoonahay Shiinaha waa wadan leh hiddo dhaqameed soo jireen ah. Waxsoosaarka beeraha ayaa sidoo kale sii waday inuu ku sii xoogeysto kobcinta tikniyoolajiyadda. Bilowgii, waxaan ka shaqeyn jirnay guri yar oo burbursan ....
Immisa nooc oo lagu koriyo ayaa jira? Waxaa jira laba siyaabood oo lagu kala garto tan. Habka koowaad: Sida ku cad maaddada daboolka si loo kala sooco aqalka dhirta lagu koriyo. Sanadihii la soo dhaafay tan iyo markii lagu koriyo ...
Waxaan leenahay ujeedooyin kala duwan oo aqalka dhirta lagu koriyo Soo saar miraha iyo khudaarta, ubax beero, kor u qaad dhirta yar yar ama cilmi baarista xashiishka Waxaa jira laba qaybood oo lagu gaarayo yoolalkaas ， Mid waa macaamilka kan kalena waa takhasusle AXgreenhouse Macaamiisha, lacagtu waa arrin aad muhiim ugu ah xamda yar ...
Sida loo helo amaah aqalka dhirta lagu koriyo
Marka la qorsheynayo in la dhiso aqalka dhirta lagu koriyo, dhammaanteen waxaan u baahanahay inaan wajahno dhibaato, maalgelin. Markaad dowladda ka codsan kari weydo lacag ama aadan deyn ka heli karin banki. Waxaad isku dayi kartaa inaad waxbadan kabarato Awoodda Kobcinta ama Agamerica. Si kasta oo qorshaha u fiicnaado, waxaad had iyo jeer u baahan tahay qorshe kayd ah Qiimaha alaabta ...